Shiinaha Sodium Perchlorate warshad iyo soosaarayaasha | YANXA
Caanaha 'Molecular formula':
UN Maya .:
Sodium perchlorate waa iskudhaf aan dabiici ahayn oo leh kiimikada caanaha NaClO₄. Waa dhagxan cad, xaydh isku dhafan oo si heer sare ah ugu milma biyaha iyo aalkolada. Badanaa waxaa loo arkaa inay tahay nooca loo yaqaan 'monohydrate'.
Daawada sodium perchlorate waa oksijiye awood leh, in kastoo aysan waxtar u lahayn pyrotechnics sida milixda ay ku jirto maadada 'hygroscopicity'. Waxay ku falcelin doontaa aashitada adag ee macdanta, sida sulfuric acid, si ay u sameysmaan aashitada 'perchloric acid'.
Adeegsada: inta badan waxaa loo isticmaalaa soosaarida kalluun kale iyada oo loo marayo geedi socodka laba-burburka.
1) sodium perchlorate, fuuqbaxa
Sodium perchlorate waa oksijiye awood leh. Waa in laga fogeeyaa walxaha dabiiciga ah iyo walxaha yaraya. Si ka duwan chlorrates, isku darka perchlorate isku baaruuddu waa kuwo xasilloon.
Waa mid dhexdhexaad ah oo sun ah, maadaama qaddar aad u badan ay faragelin ku sameyso iodine-ka ee qanjirka 'thyroid'.
NaClO4 waa in lagu keydiyaa dhalooyinka si adag loo xiray maaddaama ay xoogaa yar tahay hygroscopic. Waa in laga fogeeyaa uumiga aashitada leh ee xoog leh si looga hortago sameynta aashitada perchloric acid, dabka iyo halista qarax. Sidoo kale waa in laga fogeeyaa waxyaabaha guban kara.
Sodium perchlorate waa inaan lagu shubin godka bulaacada ama aan lagu daadin deegaanka. Waa in lagu dhexdhexaadiyaa wakiilka yareynta NaCl marka hore.
Daawada sodium perchlorate-ka waxaa lagu burburin karaa birta macdanta ah hoostiisa iftiinka UV, maqnaanshaha hawo.
Hore: DDI (Dimeryl Diisocyanate)
Atoomis budada Magnesium Alloy Powder